एमाले नेता सुवास एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश ! - jagritikhabar.com
एमाले नेता सुवास एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश !
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेमा ४० वर्ष भन्दा लामो राजनीतिक यात्रा समाप्त गर्दै एक नेता पार्टीबाट बाहिरिएका छन् । पूर्वसांसद एवं एमाले नेता सुवास पार्टी परित्याग गरेका हुन् । कर्माचार्यले आइतबार सामाजिक सञ्जालमार्फत ४० वर्ष लामो एमालेसँगको राजनीतिक यात्रा समाप्त भएको घोषणा गरेका हुन्।
उनले भनेका छन्, ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेसँगको ४० वर्ष भन्दा लामो राजनीतिक यात्रा समाप्त भएको घोषणा गर्दछु।’ यद्यपि आगामी यात्राबारे भने केही खुलाएका छैनन्।
तर, उनले पार्टी छाडेपछि एमाले सिन्धुपाल्चोकमा हलचल पैदा भएको छ। एमाले नफुट्दासम्म उनी माधवकुमार नेपालसँग नजिक मानिन्थे। सिन्धुपाल्चोकमा उनको ५० प्रतिशत पकड छ ।
उनले गत हप्ता एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग भेटेका थिए । नेपालसँग भेटेको साताभित्रै फेसबुकमा उनले ४० वर्ष लामो एमालेसँगको राजनीतिक यात्रा समाप्त भएको घोषणा गरेका हुन् । कर्माचार्यको बहिर्गमनले केपी ओलीलाई ठूलो धक्का लागेको छ ।
१२ स्थानीय तहमा चौतारा साँगाचोकगढी, जुगल, इन्द्रावती, हेलम्बु, बलेफी, मेलम्ची र पाँचपोखरी थांपाल गाउँपालिकामा कर्माचार्यको पकड छ ।
एमाले विभाजन नहुँदा सिन्धुपाल्चोकमा ७० प्रतिशत नेता कार्यकर्ता माधव नेपाल पक्षधर मानिन्थे । तर, विभाजनपछि थोरै संख्यामात्रै एकीकृत समाजवादीमा समाहित भएका थिए । एमाले विभाजनलगत्तै नेता नेपालसँग एकीकृत समाजवादीमा खुल्ने अड्कल गरिएको थियो । तर, स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले उनलाई रोकेका थिए ।
सिन्धुपाल्चोकबाट एमालेको केन्द्रीय सदस्यमा शेरबहादुर तामाङ, अरुण नेपाल र सरेश नेपाल अटाउँदा उनी अटाउन सकेनन्। एमाले स्थायी कमिटी सदस्यमा तामाङ, पोलिटब्यूरो सदस्य अरुण नेपाल पर्दा उनीहरुकै सहकर्मी रहेका कर्मचार्य बाहिर परेका थिए।
समकालिन नेता कर्माचार्य एमालेको दशौं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यको आकांक्षी थिए। तर, उनी पराजित भए। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुनाएको सूचीमा उनी परेका थिएनन्।
दुई कार्यकाल एमाले सिन्धुपाल्चोकको पार्टी प्रमुख भएका कर्माचार्य २०५६ सालमा प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर २ बाट सांसदमा निर्वाचित भएका थिए। त्यसपछि उनले टिकट पनि पाउन सकेका छैनन्।
स्थानीय सरकारमा रहेका सात प्रमुख र ४५ वडाध्यक्षमा ५० प्रतिशत कर्माचार्यनिकट मानिन्छन् । स्थानीय तहको चुनाव घोषणा भएपछि कित्ताकाट गरेर जाने तयारीमा अधिकांश जनप्रतिनिधि रहेको बुझिएको छ ।